Iimfihlelo ezi-5 zesikhumba se-matel velvety: makeup and not kuphela
Isondlo esifanelekileyo. Iziqholo ezivumba, i-dessert, ikhofi, ubisi, i-marinades e-spicy kunye ne-sauces ikhupha ukukhushulwa kwe-sebum. Ayikwazi ukuyeka ngokupheleleyo iimveliso ezingafunekiyo? Thatha umgaqo ukuba uhlele "ukulayisha" iintsuku phambi kweemeko ezibalulekileyo, ukongeza kwimenyu yamanzi ngejisi lemon, i-herbal teas, isipinashi kunye nekarothi. Ulusu luya kuba lutsha kwaye luphilile.
Ukutya ngaphandle kokutya okucoca kunye ne-cafeine - imfihlo yesikhumba esihle
Iitayi zeoli okanye itiye eluhlaza. Ngaphambi kokuba uqale ukwakheka, sula ulusu oluhlambulukileyo nge-cotton disc ehambelana ne-decoction efudumele okanye i-emulsion ye-oyile: ulusu luya kulugcina ixesha elide lugcina i-matte ethambile.
Iitayi ezihlaza kunye neoli yetiyi - i-antioxidant agents
Musa ukulibala malunga nekhilimu. Isikhumba se-oily sidinga ukunyanzeleka nokutya, kunye nolusu olunomdla. Emva kokuhlamba kusasa, sebenzisa ukhilimu wokumisa kunye nokuwugubungela ngokukhawuleza kwesikhumba. Susa ama-agent angaphezu kwama-tissue ngemizuzu embalwa. Nika okukhethekileyo kwimveliso emanzini-abayikushiya amanqabileyo anamathele kwaye banemibala emnandi.
I-Cream kunye ne-phytoextracts-kwi-skin ye-matt
Qinisekisa ukusebenzisa i-primer: ngaphandle kwayo, i-makeup "iya kuhamba" emva kweyure - enye nesiqingatha. Ukufumana iziphumo ezilungileyo, sebenzisa i-primer emva kwekhefu kwisikhumba esikhuniweyo, uhlawule ingqalelo ekhethekileyo kwi-T-zone, ebunzini nangengununu. Ukubambisana okuqhubekayo okubambezelayo akugcini nje ukuphelisa i-glossy se-glossy, kodwa kwakhona kubonakala kwincinci i-pores, ikhuphe ukukhupha kunye nokufihla ukungapheleli okuncinci.
UBacca Primer - ukhetho lwabaqeqeshi
Faka isicelo seetoni ngokuchanekileyo. Ngomdaka obumnandi obuninzi okanye umbhobho ojikelezayo, ngokusasaza umveliso phezu kwesikhumba kunye nokuhamba kakuhle. Ukufezekisa ukugubungela - "i-watercolor", isetyenziswe kwiziqendu ezimbini. Le ndlela izakuvumela ukuba ugcine ingubo yokubambisa ixesha elide.
I-Tonal "isigqubuthelo" iya kwandisa ukunyamezela kokwenza
Indlela yokufihla ukungabikho kobuso
Indlela yokujongana neengxaki zesikhumba ekutshiseni: iingcebiso ezi-3 ezivela kwi-cosmetologists
Ukusetyenziswa kwe-tar soap
Indlela yokujonga ukuba yiyiphi inwele enombala oyifanelekileyo: Umbala weklasi umbala
Ubudala obuhle: 4 imigaqo yokwenza emva kwe-35
Indlela yokuba yindle: isiluleko esilula kodwa esisebenzayo
Izilwanyana zasebhanti zaseJapan - izithako zesithethe sasendulo
Amava okuqala ngokwesini somfazi
Ukuphuhliswa ngokwesondo kunye nokukhuliswa komntwana
Ukutshiza inyama kunye namakhowe
Iintlobo ezi-5 zamadoda ukuphepha
UTatyana Navka noDmitry Peskov baphuma kunye nabantwana abadala
Ukuzivocavoca ukwandisa ubungakanani besisu
Ukudla okuthandwayo kwintandokazi yakho: yintoni ukupheka ekhaya ngeSuku lweValentine ngoFebruwari 14
Ubundlobongela Emtshatweni kunye neengxaki zoSondo njengesiphumo somtshato
Ikhekhe echithwe ngeapulo kunye nesinamoni
Iimbangela, iimpawu kunye nokunyangwa kweenkqubo ezivuthayo kwi-bladder
I-horoscope yoBuntu ngo-2010, i-Aquarius
Amakhadi okubambisa kunye nemifanekiso kwiLwesine elungileyo ngo-2018 kunye nemibhalo kunye nezifiso
Unxibelelwano kunye nezihlobo zomntwana owamkelweyo
Ikheka kunye neetamatato kunye nesaladi
Yintoni yokwenza xa umntwana ezalwa ngaphambi kwexesha?
I-recipe ye-original "yokuphambana" neepula kunye ne-caramel eyenziwe yenziwe